Zonke abafana ukwazi ukuthi amantombazane - lena izidalwa ezingezwakali kakhulu, ezingalindelekile futhi ebucayi emhlabeni! Ongeke wazi ukuthi ngokuzayo inflates: cha bukeka, hhayi wathi, ukhohlwe ukukhokha ukuncoma, ngakho indoda ungenza faux pas ayizinkulungwane hhayi ukukhokha noma yiziphi ukuliqaphela ... Kodwa amadodakazi ka-Eva akuzona ngakho: babone konke. Ngakho akukho lutho isimanga yokuthi zonke izinsuku eziningi abantwana bakwa-Adamu uyazibuza: '? Kanjani ukuxolisa intombi yakhe "
Ngaphambi kokuthi uqale ukuxolisa futhi baveze wokuzisola ngalokho ayekwenzile, kwakungeke ubuhlungu ukuthola, futhi yini, eqinisweni, ngenzile okubi sikhathi. Futhi ngokuvumelana isimo. By endleleni, it is a inketho evame kakhulu uma intokazi akhubeke ngaso sonke ecacile ngalolo ... Kodwa kulokhu bekusayoba kungadingeki axolise, yebo, uma intombazane wena komgwaqo.
Girls bavame nje sengathi icala. Khona-ke bayakwazi ukuthola iphutha nge yonke imininingwane. Ngaleyo ndlela uhlangabezana namasoka abo ukuze sibone ukuthi banjani kuzosebenza kanjani nokuthi kuzothatha. Mhlawumbe lady yakho awulona Zethembe noma imizwa yakho futhi bemagange uqinisekise ukuthi bayathandwa. Lona khetho elula. Yena uyokuthethelela futhi ngeke, njengasekuqaleni, elimnandi, umnene, kanye ayeqiniseka imizwa yakho ngenxa yakhe.
Kodwa uma icala ngempela - kwephuze kakhulu isikhathi eside ngosuku, luhlaza, noma Qha, makungabi njalo, futhi bayahlonishwa hhayi intombi yakhe kuhle - ke kudingeka sibe nesineke futhi ubonise umcabango emangalisayo ukuze uthole intethelelo. Ecaleni okubi kakhulu - ukungathembeki yakho, kodwa ingaxazululeki ngokuphelele, uma wazi izindlela ezimbalwa win-win, njengoba enhle ukuba axolise intombazane.
Ukuphenduka kumelwe kube qotho
Khumbula oyisisekelo: nenzani, kube-ngukuphenduka kumelwe baqiniseke ngobuqotho futhi akavumi ukuba intombi ukungabaza. Ngisho noma icala dabukisa (Ngokubona kwakho), ukuze sicele intethelelo kuhamba phambili, njengokungathi izono ezinkulu ngemuva ezimbalwa okungenani. Ayikho indida kanye kweswela! Yena udinga ukuqonda ukuthi uyawazisa ngempela ubuhlobo bakho futhi bayesaba yikho. Nanti iphuzu eliyinhloko, okuyinto kuwufanele ukunaka lapho sinquma "kanjani ukuba uxolise."
Ukuziqhenya kwakho asihlobene ngokuphelele lapha. Kulokhu, umsebenzi wakho - ukuze sithethelelwe kumnyama kubomvu, futhi ukufeza umgomo, njengoba yaziwa, zonke izindlela zinhle. Khumbula, i-ukuzixazulula kangcono: ngokwethembeka, evulekile, ecela intethelelo umbono; izimbali (i-bezitshela ukuthi kungcono) futhi abaqotho "Ngiyaxolisa." Kunxusa intethelelo kumele njalo ayoliswe ziqinisekiso wokushisa uthando. Futhi musa uzisole upende: izindlebe yentombazane uthanda kakhulu ukulalela ukuhlonishwa okunjalo. Empeleni, uma isono sakho wawuyinto ezincane ke lokhu ngeke kwanele. Uma kungenjalo, khona-ke siqhubeka sitadisha umbuzo "indlela ukuxolisa intombi yakhe" ku.
Bonke abesifazane abathanda romance! Kungakhathaliseki ukuthi umuntu mdala intombi yakho, enhliziyweni yakhe, usalokhu enomuzwa wokuthi like a princess Fairytale ubani okufanele athole izenzo Amazing kakhulu knight zakhe ezithembekile. Futhi kuhle ngempela! Ngoba kunikeza ithuba intethelelo ngisho namacala amakhulu kakhulu.
Indlela ukuxolisa intombi yakhe ngosizo romance? Kulula kabi! Tinkondlo, Serenades ngaphansi emphemeni, umbhalo phezu kwendawo egandaywe ngamatshe phambi kompheme wakhe - konke imisebenzi, futhi kanjani! Ngokwedlulele kunazo ngamazwi ashiwo namanenekazi angase alinge kushiwo okuthile okujule nakakhulu. Classics uhlobo: ukubhala igama lakhe into abanye kahle esikhulu kakhulu (ipayipi CHP Luhle). Ungakhathazeki, kwaba ihlaya.
Wasebenzise kahle amathuba ezingxoxo le sevisi elula, njengoba ukulethwa izimbali ekhaya. Ikakhulukazi kuyasiza uma kwenzeka ukuthi enqaba ukukhuluma nawe. Akafuni ukukhuluma ngani? Nokho, leyo nto! Mthumele njalo ekuseni, bamphathele rose ngenothi ngaphakathi, okuyinto Yiqiniso, amazwi uthando futhi nokucela isihe. Futhi ngokushesha nje lapho deigns enhle lungadambisa ubulungisa nesihe, singakwazi etukwetimphumelelo dinner yothando nge amakhandlela. Fortress kuyokwehlela!
Ecaleni okubi kakhulu
Indlela ukuxolisa intombi yakhe, uma ushintshe, futhi ngandlela-thile sezwa ngalokho? Kulokhu, isenzo sakho ngempela uyakufanelekela isijeziso, ukuze uzilungiselele ukuba zihlupheke. Intombazane idinga isikhathi esingakanani ukululama ngemva kokuphathwa yokushaqeka uqale bakwethembe futhi. Qoqa ukubekezela, ngoba kuyisikhathi eside ...
Ungasebenzisa zonke lezi amasu, kodwa akukho romance into engathatha isikhundla kuleli cala ngokuqondile, baxoxa isikhathi eside futhi kabuhlungu. Zama uchaze ukuthi kungani ziye zakwenza lokho, futhi okubaluleke - zama wakhe sikholelwe ukuthi ngaphezulu kwalesi akusoze kwenzeke futhi.
Uhlu abathengisa emva ebangeni le-11. umsebenzi ehlonishwayo futhi ethandwa
Kufanale agqoke izikhindi zangaphansi Plastic umndeni wakho
Novosibirsk Museum (umlando wendawo). Novosibirsk Museum
Umculi odumile - buynov Aleksandr